मिडियासम्बन्धी विधेयकका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको नेता नेपालको दाबि - सगरमाथा साप्ताहिक
मिडियासम्बन्धी विधेयकका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको नेता नेपालको दाबि
Published on 2019-05-200Comments
दाङ , जेठ ६ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गत वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता गरिएको मिडियासम्बन्धी विधेयकका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले पार्टीमा छलफल विना नै विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हुँदा केही विवाद सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
प्रेस सङ्गठन दाङको आयोजनामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विधेयकलाई लिएर पत्रकारले असन्तुष्टि जनाइरहेकाले पत्रकारको हित विपरीत भए सच्याइने पनि उल्लेख गर्नुभयो । “मनपरी लेख्नेलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ, तर सञ्चार क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने गरी विधेयक आउदैन”, उहाँले भन्नुभयोे, “पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई रोक्नका लागि पत्रकारका नेता र राज्यका निकाय अग्रसर हुनुपर्छ ।”
यसै बिषयमा मिडिया बिशेषज्ञ भानुभक्त आचार्य टिप्पणी गर्नुहुन्छ : 'हिजो ज्याला समेत लिएर मिडिया विधेयकको मस्यौदा बनाउनेहरु पो आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा आउलान् जस्तो भो । मूल कुरा यो विधेयक कसले बनायो ? कुन नियतले बनायो ? त्यस्तालाई चिनेर, सार्वजनिक गरेर पूरै पेसागत बहिष्कार नगरी यो रोग फेरि पनि बल्झिन सक्छ । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा लगायतलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ । राजिनामा माग्नुपर्छ ।'
लागुऔषधसहित चार युवक पक्राउ
संविधान कार्यान्वयनयमा पक्ष प्रतिपक्ष हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
दशैँमा मालवाहक गाडी राति चलाउने सहमति
संविधान दिवसमा प्रभातफेरी